काठमाडौँ उपत्यकामा आज २८ स्थानबाट कोभिडबिरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा दिईदै (सूची सहित) | Nepali Health
काठमाडौँ उपत्यकामा आज २८ स्थानबाट कोभिडबिरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा दिईदै (सूची सहित)
२०७८ वैशाख १४ गते ८:०६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १४ बैशाख । आज (मंगलबार)काठमाडौँ उपत्यका भित्रका तीन जिल्लाका २८ स्थानबाट कोभिडबिरुद्धको चिनियाँ खोप भेरोसेल दिईदै छ । काठमाडौंको ११ स्थानबाट, भक्तपुरको १० स्थान र ललितपुरको ७ स्थानबाट भेरोसेल खोप दिइने भएको हो । यो खोप १८ बर्ष देखि ५९ बर्ष उमेर समूहकाले लगाउन पाउनेछन् । खोप लगाउन जाँँदा नागरिकता वा सरकारी परिचयपत्र लिएर जानुपर्नेछन् ।
भक्तपुरमा कहाँ कहाँ ?
ललितपुरमा कहाँ कहाँ ?
यता ललितपुरका आज सात ठाँउमा भेरोसेलको पहिलो मात्रा दिईदै छ । ललितपुर स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा खगेश्वर गेलालका अनुसार आज पनि अल्का २ भुनिमण्डल, आनन्दबन अस्पताल र किष्ट मेडिकल कलेज ग्वार्कोमा हिजो जस्तै खोप दिइदैछ । यस्तै आज पुल्चोकस्थित निदान अस्पताल, भैसेपाटीस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, लुभु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र बज्रवाराही अस्पताल गोदावरी गएर पनि खोप लिन सकिने स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ ।
मास्क नलगाई बैठकमा सहभागी भएका थाइ प्रधानमन्त्रीलाई ६००० भाट जरिवाना